Soo dejisan Documents To Go 4.002.1516 – Vessoft
AndroidXafiiskaSoftware softwareDocuments To Go
Bogga rasmiga ah: Documents To Go
Wikipedia: Documents To Go
Documents Si Tag – software ah in ay la files Word, Excel iyo PowerPoint shaqeeyaan. software The kuu ogolaanayaa inaad si aad u eegto files PDF ah, la abuuro iyo edit faylasha xafiiska of qaabab kala duwan. Documents Si Tag taageertaa .Wadashaqayntaas dukumentiyada text, oo awood u helaan in ay wax files kaydiyaa qalabka kale, PC ama storages daruur. software waxaa ku jira tiro balaadhan oo ah qalabka iyo muuqaalada si edit iyo qaabka faylasha. Documents Si Tag leeyahay fudud ah si ay u isticmaalaan interface filaayo waayo talooyin ku taabto.
Waxay abuurtaa iyo tifatirada files ah
Views files PDF ah
Connection ee feature a waafajinta dukumentiyada
set A of qalab loogu talagalay tafatirka
Dhisay-in tababaraha file
Soo dejisan Documents To Go
Faallo ku saabsan Documents To Go
Documents To Go Xirfadaha la xiriira
Microsoft PowerPoint – waa fududahay in la isticmaalo softiweer si ay ula shaqeyso soo bandhigyada. Software-ka wuxuu taageerayaa tiro badan oo qalab ah oo loogu talagalay qaabeynta tayada ee bandhigyada.
Microsoft Word – mid ka mid ah barnaamijyada ugu caansan ee lagu abuuro ama lagu duubo dukumiintiyada. Software-ka wuxuu taageeraa shaqooyin badan oo kala duwan wuxuuna leeyahay nidaam maareyn ku habboon oo ku habboon aaladda Android.
La dhageysan karo – waa codsi la soo dejiyo oo lagu dhageysto buugaagta maqalka. Software-ka waxaa ku jira maktabad ballaaran oo buugaag ah waxayna taageerta habab kala duwan oo dib loogu eegayo.
Microsoft Excel – waa softiweer ay la shaqeeyaan wargeysyada ka socda Microsoft. Softiweerku wuxuu leeyahay qalab fara badan iyo astaamo lagu habeeyo dukumiintiyada si buuxda ula jaan qaada qalabka kale.
KakaoTalk – softiweer caan ah oo la isku weydaarsado farriimaha qoraalka isla markaana sameeya codka ama wicitaanka fiidiyaha. Softiweerku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad wareejiso feylasha waxaana ku jira set badan oo dhoola cadeyn ah.
Chromecast – waa barnaamij lagu xakameeyo aaladda Chromecast. Software-ka wuxuu awood u siinayaa inuu ku baahiyo waxyaabaha warbaahinta ku saabsan taleefanka casriga ama kombiyuutarka kiniiniga illaa HD-TV.